Sidee Sicir-bararka Suuqa Waqtiga-Sare U Kordhin Kara Waxqabadka Ganacsiga | Martech Zone
Talaado, Febraayo 11, 2020 Talaado, Febraayo 11, 2020 Pete Eppele
Maaddaama adduunyada casriga ahi ay muhiimad gaar ah siinayaan xawaaraha iyo dabacsanaanta, awoodda lagu soo bandhigo waqtiga-dhabta ah, qiimayaasha aadka u khuseeya iyo hagida iibka ee marinnada iibkooda ayaa ganacsiyada siin kara gacanta sare ee tartamayaasha marka ay timaaddo la kulanka himilooyinka macaamiisha. Dabcan, kolba baahida dalab ee waxqabadku way sii kordhayaan, sidoo kale dhibaatooyinka ganacsiga ayaa sii kordhaya.
Xaaladaha suuqa iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa isbeddelaya xawaare sare oo xawaare sare leh, taasoo ka dhigeysa shirkadaha la halgamaya inay ka jawaabaan kiciyeyaasha qiimaha - dhacdooyinka sida isbeddelka qiimaha, canshuuraha, qiimeynta tartanka, xaaladda alaabada, ama wax kasta oo lagama maarmaan u ah isbeddelka qiimaha - si deg deg ah, waxtar leh oo wax ku ool ah. Marka la saadaalin karo oo la maareyn karo, kiciyeyaasha qiimaha ayaa si aad ah u dhacaya.
Sanadka 2020, macaamiisha B2B waxay si fudud uga filanayaan macaamiil u eg khibrad ganacsi-bixiyeyaasha - gaar ahaan xagga qiimaha. Inkasta oo ay kakooban tahay qiimaha B2B, macaamiisha waxay filayaan in qiimayaashu si sax ah uga tarjumayaan xaaladaha suuqa, inay yihiin cadaalad, loo habeeyay oo isla markiiba la heli karo - xitaa xigashooyin waaweyn.
Ku tiirsanaanta habab dhaxal si sicir loo dejiyo ayaa kaliya u adeegtay inay sii xoojiso saameynta xun ee qulqulka qulqulka qiimayaasha. Taabadalkeed, hogaamiyaasha aragtida lihi waa inay dib uga fakaraan qaababkooda si ay u keenaan Qiimeynta Suuqa Waqtiga-dhabta ah.
Qiimaha Suuqa Waqtiga-Dhexdiisa waa aragti qiimayn oo ah mid firfircoon oo cilmi ah. Si ka duwan qaababka kale ee qiimaha firfircoon, kuma joogsato xeerarka otomatiga; waa deg deg in laga jawaabo, laakiin hab caqli leh.
Maqaalkan, waxaan kugu dhex mari doonaa laba xaaladood oo adeegsi ah Qiimaha Suuqa-Waqtiga-Suuqa - eCommerce iyo qiimaha oggolaanshaha shaqooyinka ee amarrada - oo waxaan ka wada hadli doonaa sida dib-u-eegista xaaladdu ay si fiican ugu adeegi karto ganacsigaaga una kobcin karto waxqabadka ganacsiga.
Qiimeynta Suuqa Waqtiga-Dheer ee eCommerce - Waa maxay iyo Maxaad ugu Baahan Tahay
Hubinta in qiimeyntu ay si fiican ugu fududaato kanaallada dhaqanka ay kaligeed caqabad ku tahay; shirkadaha waxaa lagu sii kordhiyay halka laga soo galo eCommerce.
Su'aalaha ugu culus ee aan ka maqlo madaxda shirkadda B2B markay timaado xalka adag ee eCommerce waxay la xiriiraan qiimaha. Su'aalaha waxaa ka mid ah:
Waa maxay sicirada ay tahay in loo soo bandhigo macaamiisha khadka tooska ah?
Sideen u kala duwanaan karaa qiimaha kufiican si loo ixtiraamo cilaaqaadka macaamiisha jira?
Kawaran haddii qiimaha aan ku muujiyo khadka tooska ah ay ka hooseeyaan waxa ay macaamiishaydu bixinayeen?
Sideen ugu adeegi karaa qiimaha saxda ah ee soo jiidanaaya macaamil cusub si uu ubilaabo ganacsi aniga ilaah isagoon waxbadan udhimin?
Qiimahaygu miyay kufiican yihiin inaan alaab cusub ka iibiyo macaamiisha, aniga oo aan la hadlin wakiilka iibka ama aan u baahnayn gorgortan?
Dhammaan su'aalahan waa ka waxtar badan yihiin, hase yeeshe, xallinta mid keli keli ah kuma siinayso tartan muddo dheer ah kanaalkan daruuriga ah. Hase yeeshe, qiimaha eCommerce waa inuu ahaadaa mid dhab ah oo firfircoon. Qiimaha firfircoon - halka wax ka mid ah ereyga 'buzzword' - macnaheedu yahay in macaamiishaadu ay arkaan qiimaha ku habboon xaaladaha suuqa meel kasta oo waqti ah. Si kale haddii loo dhigo, Qiimeynta Suuqa Waqtiga-dhabta ah.
In kasta oo qeexitaanku fududahay, gaaritaankiisuse ma aha mid toos ah. Xaqiiqdii, sicirka dhabta ah ee suuqa ee eCommerce waa wax aan macquul aheyn marka qalabka kaliya ee ku jira sanduuqaaga ay yihiin waraaqo dhaqameedyo iyo ilo xog kala duwan oo koraya ka hor intaan la falanqeyn, iskaba daa in wax laga qabto.
Hase yeeshe, qiimeeyayaasha iibiya softiweerku waxay kaa caawin karaan inaad dejiso istiraatiijiyad qiimo leh oo isku mar ah oo khadka tooska ah laga helo oo himilooyin badan ka gaara ganacsiga, iyadoo macaamiisha la siinayo qiimeynta ay filayaan iyadoo aan dib loo dhigin.
Mid ka mid ah kiisaska isticmaalka eCommerce ayaa adeegsanaya xogta khaaska ah ee khadka tooska ah sida aragtiyada bogga, beddelaadda, ka tagida gaadhiga iyo helitaanka agabka si loo dejiyo xeelado badan oo qiimo dhimis ah oo loogu talagalay qiimaha eCommerce. Tusaale ahaan, agabka sare iyo aragtiyada bogagga leh beddelidda hoose waxay muujin karaan qiimaha inuu aad u sarreeyo. (Waxaa jira kicintaas qiimaha ah!)
Dejinta istiraatiijiyado qiimo dhimis caqli-gal ah ayaa si aan dhammaad lahayn ugu fududaan habkan, taas oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu si fudud u soo jiito oo u falanqeeyo noocyada kala duwan ee xogta, laakiin sidoo kale la jaanqaado nasashada dhimista duulimaadka. Tusaale ahaan, si deg deg ah u dejinta qiimo dhimis boqolkiiba 30 boqolkiiba tiro ah 20 cutub markii xogtu tilmaamayso in qiimayaashu ay aad u sarreeyaan si loogu wareejiyo agabka. Marka lagu daro iyada oo loo marayo helitaanka sare ee API, qiimaha cusub ama qiimo dhimista waxaa isla markiiba lagu cusbooneysiin karaa kanaalkaaga eCommerce.
Marka lagu daro dejinta istiraatiijiyado qiimo dhimis badan, Qiimeynta Suuqa Waqtiga-dhabta ah ee eCommerce waxay u oggolaaneysaa shirkadaha B2B inay:
Kala saar qiimeynta macaamiisha jira iyo booqdayaasha cusub ee qeybta wax soo saarka ama heerka SKU
Deji qiimo-dhimis u gaar ah e-commerce oo shaqsi ahaan loo beegsan karo (ama bartilmaameed u ah) qaybaha macaamiisha iyo kooxaha wax soo saarka
Ku soo bandhig qiimaha macaamiisha gaarka ah iyo qiimaha jaangooyada firfircoon ee qaddarka jaban ee khadka tooska ah
Isku-darka is-beddelka salka ku saleysan jilicsanaanta, hubinta joogtaynta qiimaha omnichannel ee gaadha dakhliga iyo bartilmaameedyada yar yar ee ganacsiga
Ka wareejinta falcelinta, howlaha cakiran waxay u baahan tahay in dib looga fakaro hanaan wax ku ool ah oo ku saleysan xogta iyo sayniska si loo gaarsiiyo Qiimaha Suuqa Real-Time. Marka sidaas la sameeyo, ganacsiyada waxay noqon karaan kuwo sifiican u qalabaysan si ay ula kulmaan rajooyinka macaamiisha ee khadka tooska ah.
Qiimeynta Suuqa-Waqtiga ee Amarada waxay hagaajineysaa Natiijooyinka Dhaqaalaha iyo Hawlgalka
Xaqiiqdii, faa'iidooyinka isku midka ah ee Sicirka Suuqa-waqtiga-dhabta ah ee eCommerce waxaa si fudud loogu dheereynayaa qiimayaasha kale iyo nidaamyada ka socda shirkadda B2B. Marka firfircoonaanta, qiimayaasha la hagaajiyay lagu bixiyo iyada oo loo marayo API-da waxqabadka sare, cirku caadi ahaan waa xadka marka ay timaado noocyada dhibaatooyinka aad ku xallin karto waqtiga dhabta ah.
Ka-faa'iideystaha caanka ah ee muuqaalka qiimaha waqtiga dhabta ah waa muddo dheer Zilliant macmiil Shaw Industries Group Inc., oo ah bixiye dhul-ballaadhan oo caalami ah oo ka shaqeeya $ 2 bilyan-doollar 'dakhli sanadle ah oo ka badan malaayiin khadadka heshiiska qiimaha macaamiisha.
Shaw wuxuu adeegsadaa awoodda qiimeynta si uu u xaqiijiyo in amarradeeda ay u dhigmayaan qiimaha lagu heshiiyay ee waqtiga-dhabta ah, ka dibna u sii maraya cidda saxda ah ee oggolaanshaha ku saleysan heerarka oggolaanshaha ee aan si fudud ugu beddelan karno. Haddii wax khaldan oo qiimeyn ah la ogaado, amarka waxaa toos loogu diraa barta ku habboon ee lala xiriirayo si loo oggolaado ama loo saxo isla markiiba. Shaqeynta softiweerku waxay u saamaxday Shaw inuu si guul leh uga hawlgalo qiyaastii 15,000 codsi maalintii, oo uu isbeddello ku sameeyo habsami u socodka iyo heerarka oggolaanshaha si dhakhso leh oo fudud. Isbeddelada noocan ah waxay ku qaadatay toddobaadyo ama bilo inay saameyn ku yeeshaan nidaamkeenna hore.
Carla Clark, Agaasimaha Waaxda Dakhliga ee Sahley Warshadaha
Marka lagu daro faa'iidooyinka wax ku oolka ah ee Qiimeynta Suuqa Waqtiga-dhabta ah oo awood u yeelan kara, shirkadaha B2B sidoo kale waxay u taagan yihiin inay si weyn u kordhiyaan dakhliga iyo hoos udhaca iyagoo u keenaya khibradaha loogu talagalay macaamiisha filayaan.
Qiimaha Suuqa-Waqtiga-dhabta ah ee eCommerce ama kanaalo kale waa in isla markiiba la heli karaa, qiimayaal ku habboon kanaalka oo si sax ah uga tarjumaya xaaladaha suuqa ee hadda jira iyo xiriirka macaamiisha. Waa in isla markiiba la gaarsiiyo, xitaa codsiyada tirada badan, iyada oo aan dib loo dhigin inta lagu jiro wadahadallada. Intaa waxaa sii dheer, xalka in runti uu noqdo mid firfircoon oo waqtiga dhabta ah, sidoo kale waa inuu:
Ka tarjuma qiimaha suuqa ee hadda la xisaabiyey iyo / ama loo rogay ka soo horjeedka wax soo saarka kala duwan
U isticmaal xog badan ilaha kala duwan, ilo aan xadidnayn si caqli badan
Keen qiimaha oo ku habboon istiraatiijiyadda kanaallada oo dhan waqtiga dhabta ah
Si caqli ku shaqeynaya u oggolaanshaha oggolaanshaha, gorgortanka, soo-jeedinta ka-hor-tagga ah
Gaarsiiso talooyinka iskutallaab-iibinta iyo iibinta
Si aad wax badan oo ku saabsan baran Qiimaha Suuqa Waqtiga-Dhexdiisa kaas oo keena qiimeyn ku habboon, caqli iyo suuq ku habboon suuqa daqiiqad, aqri ogeysiiska Zilliant:
Qiimaha Waqtiga dhabta ah ee ganacsiga E-commerce
Tags: carla clarkqiimaha firfircoonbinta caqligabintaqiimaha suuqa-waqtiga dhabta ahQiimaha Suuqa-Waqtiga-dhabta ah ee eCommerceqiimaha waqtiga dhabta ahkobcinta dakhligawarshadaha shawdhalaalaya
Pete wuxuu keenaa 20 sano oo khibrad istiraatiijiyadeed ah, ka caawinta Fortune 500 shirkadaha inay adeegsadaan Xogta Weyn si loo hagaajiyo waxqabadka ganacsiga. Maaddaama uu yahay Ku-Xigeenka Sare ee Badeecadaha iyo Sayniska, Pete ayaa mas'uul ka ah hoggaaminta Halyeey'R&D dadaaladiisa iyo qeexitaanka meertada nolosha iyo waxyaabaha loo baahan yahay. Ka hor Zilliant, Pete wuxuu u adeegay Madaxweyne kuxigeenka Suuqgeynta Wax soo saarka ee Yclip. Kahor Yclip, Pete wuxuu maareeyay KD1 macdanta xogta aadka loo cabbiri karo iyo codsiyada taageerada go'aanka ee ay isticmaaleen Walgreens, Lowe's Home Improvement iyo Pepsi / Frito Lay.